Avy any Thailand ka hatrany Myanmar ~ Journey-Assist- Avy any Myanmar ka hatrany Thailandy
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Avy any Thailand ka hatrany Myanmar
Avy any Thailand ka hatrany Myanmar. Avy any Myanmar ka hatrany Thailandy
Ahoana ny fomba hankanesana any Thailand ka hatrany Myanmar
Andraikitra miampita an'i Mae Sai - Tachileik
Andraikitra miampita an'i Mae Sai - Tachileik. Thailand - Myanmar
Any amin'ny avaratr'i Thailand (Chiang Rai Province). Azonao idirana amin'ny alàlan'ny fiara fitaterana mivantana avy any Bangkok (vidiny - 600 baht, mandritra ny 12 ora ny dia) na avy any Chiang Mai (vidiny - manomboka amin'ny 182 baht, dia maharitra 5 ora sy sasany) ny dia. Tokony ho tsaroana fa manomboka amin'ity tetezamita ity dia tsy afaka handeha lavitra kokoa any Myanmar ny vahiny. Afaka tonga any amin'ny tanànan'i Kyaingtong ihany izy, fa avy eo ny làlan-kizorana dia mihidy amin'ny teratany vahiny noho ny fihenjanana. Afaka manidina fiaramanidina avy any Tachileik na avy any Kyaingtong mankany an-tanàna hafa any Myanmar ianao. Amin'ny lafiny mifanohitra, mitovy ny zava-drehetra: raha mivoaka amin'ity andalana ity dia mila manidina avy any afovoan'i Myanmar ianao mankany Kyaingtong, aorian'izay dia afaka mizaka ny lalan-tany mankany amin'ny sisintany Myanmar-Thai ianao.
Andraikitra miampita an'i Mae Sot - Myawaddy
Andraikitra miampita an'i Mae Sot - Myawaddy. Thailand - Myanmar
Mora kokoa io tetezamita io. Tao amin'ny faritanin'ny faritany Thai, any akaikin'ny tanànan'i Mesot. Azonao idirana mivantana amin'ny bisy avy any Bangkok (mitaky 8 ora) na i Chiang Mai (vidiny - 297 baht, dia mandritra ny 6 sy sasany) ny dia. Azonao atao ihany koa ny tonga any amin'ny tanàn-dehibe ao amin'ny faritany, izay antsoina koa hoe Tak (ity dia azo atao amin'ny fomba fitaterana samihafa), ary avy any Tak ianao dia mety haka minibus mankany amin'ny sisintany miampita amin'ny vidin'ny 78 baht mandritra ny adiny iray sy sasany.
Tsy misy azo jerena ao Mesot, raha toa ka voataona ny an'i Myanmar - ohatra, matetika dia manao zipo lounge ny lehilahy. Misy trano fandraisam-bahiny maromaro mandritra ny alina, satria misokatra ihany ny fiampitan'ny sisintany manomboka amin'ny 6.00 ka hatramin'ny 18.00. Ohatra, ao amin'ny trano fandraisam-bahiny Phan Nu House, efitrano iray misy efitrano fandraisam-bahiny tsy misy rano mafana ary mpankafy mpividy 300 dolara.